Ukuphupha uCharlatan Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igama elithi charlatan lisusela emva kwinkulungwane ye-XNUMX. Ekuqaleni yayisetyenziselwa ukuchaza umntu owayengenelela kwaye ekhwaza kakhulu kwaye enikezela ngamafutha kunye namayeza athengiswayo kwiimarike. Nangona kunjalo, ezi zihlala zingakhange zivelise impumelelo yokufuna unyango.
Kungenxa yoko le nto igama elithi "charlatan" okwangoku libe yinto edumileyo yomntu ongenazo iziqinisekiso ezifanelekileyo kunye namalungelo, kodwa abe esenza amayeza. Okanye isetyenziselwa ukuchaza umntu onikezela ngamayeza athandabuzekayo kunye neendlela. Elinye ibinzana lika-charlatan linokuba, umzekelo, "charlatan."
1 Uphawu lwephupha «Quack» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Quack» - Ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Quack» - Ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Quack» - Ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kutolika uphawu "lwamaphupha" lwephupha ngokukodwa njengelinye Isilumkiso xa uphupha. Oku kuyalumkiswa liphupha lakho lenkohliso nenkohliso el mundo yomlindo. Ke ngoko, kuya kufuneka ujonge indawo ekungqongileyo ngokusondeleyo kwixesha elizayo ukuze ungalahlekiswa. Mhlawumbi iphupha sele ligcina ukukrokra kwekhonkrithi kumntu osondeleyo. Kuya kufuneka uphande ngesi sikrokro ebomini bokuvuka.
Umbono we-charlatan ephupheni unokucela nokuba ungakhohliswa zizinto ezingenangqondo kwihlabathi elivukayo okanye ukuba uchithe ixesha lakho. Umphuphi kufuneka asondele kwizenzo zakhe ngesizathu kwaye azicwangcise ngokuchanekileyo. Ngamanye amaxesha ukubona i-charlatan kunokubonwa njengophawu lokuphupha. ukungenisa yalatha ukuphupha ngesifo esithile. Umphuphi woyika ukuba oku akuyi kujongwana nako ngokuchanekileyo kwihlabathi lokuvuka. Kunokuba bubulumko ukufuna uluvo lwesibini lwezonyango kulo mbandela.
Ukuba umphuphi ngumkhohlisi ephupheni lakhe, kufuneka aqonde ukuba unendlela ekhoyo kwihlabathi lokuvuka lokuzinceda. Ukuba charlatan uphatha iphupha ephupheni, uyalumkiswa ngokokuchazwa kwephupha ngokubanzi ukuba azibandakanye nabantu abanjalo.
Uphawu lwephupha «Quack» - Ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, uphawu lwephupha "charlatan" lubhekisa kugqirha ongenamandla. Ukuba ukuphupha uzibona enjalo ephupheni lakhe, i-subconscious yakhe ifuna ukumbonisa ukuba wenze kakubi kwihlabathi elivukayo elibhekisa kwabanye abantu. Ke ngoko, umphuphi kufuneka alawule indlela aziphethe ngayo kwihlabathi lokuvuka ngokuzibophelela ukungabikho kokusesikweni fumanisa. Lo mbandela uhlala usonjululwa ngokucacisa incoko okanye uxolo.
Uphawu lwephupha «Quack» - Ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha "charlatan" lubandakanya enye umcebisi ombi kwizinto zokomoya. Ke ngoko, amaphupha kufuneka alumke kwihlabathi elivuka.